Epistily ho an'ny Efesiana - Wikipedia
Ny Epistily ho an' ny Efesiana na Taratasin' i Masindahy Paoly ho an' ny Efezianina dia boky hita ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Testamenta Vaovao izay isan' ny atao hoe epistily. Taratasy nalefan' ny Apostoly Paoly ho an'ny fiangonana kristiana tany Efesosy na Efezy na Efeso izany. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 63 no nanoratana azy. Misy toko 6 ity boky ity.
3.1 Famonjena sy fihavanan'ny voary manontolo (1.1 - 3.21)
3.2 Fananarana hanana fitondran-tena mendrika (4.1 - 6.24)
Επιστολή προς Εφεσίους / Epistolê pros Ephesious no fiantsoana azy amin'ny teny grika fa Epistula ad Ephesios kosa amin'ny teny latina. Ny Protestanta malagasy dia miantso ilay taratasy hoe Epistily ho an'ny Efesiana izay hafohezina amin'ny hoe Efesiana; fa ny Katolika malagasy kosa manao azy hoe Epistolàn'i Masindahy Paoly na Taratasin'i Masindahy Paoly ho an'ny Efezianina izay hafohezina amin'ny hoe Efezianina.
Manomboka ny taratasiny amin'ny fampahatsiahivana ny hevi-dehiben'ny hafany i Paoly. Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy mba hanafaka antsika (Efes. 1.7-8). Nefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana i Kristy ka mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra izao, ary any izy no manjaka amin'izao rehetra izao. Hanapaka ny Tontolo ho avy koa i Kristy (Efes. 1.20-21).
Mitondra ny Jiosy sy ny Jentilisa ho amin'ny toerana iray i Jesosy Kristy ka mandrava ny efitry ny fifankahalana izay manasaraka azy ireo (Efes. 2.14) ary mampiray azy ireo ho samy isan'ny Fiangonana masina itoeran'ny Fanahin'Andriamanitra (Efes. 2.22). Drafitra mandrakizain'Andriamanitra izany (Efes. 3.11).
Tsy misy afa-tsy Tompo iray sy Fanahin'Andriamanitra iray ary Andriamanitra iray izay tsy iza fa ny Ray izay Rain'ny olombelona rehetra (Efes. 4.45). Midika izany fa tokony hamela ny Fanahy hampiray fo azy ireo ny Kristiana mba hiainany am-piadanana (Efes. 4.3). Ivon'ity taratasy ity ny amin'ny maha iray ny Kristiana ao amin'i Kristy. Tokana ny Finoana ary tokana ny Batisa, izay maha toy ny vatana iray ny mpino rehetra.
Lehibe ny zavatra andrasana amin'ny olona nantsoina ho amin'ny fiainam-baovao (Efes. 4.17-5.20). Zanaka malalan'Andriamanitra ireo mpanara-dia an'i Kristy ka tokony hanao araka izay ataon'Andriamanitra (Efes. 5.1). Zatra niaina tao amin'ny haizina izy ireo, nefa tsy maintsy hiaina ao amin'ny fahazavana (Efes. 5.8-9).
Manoro hevitra ny mpivady sy ny mpianaka ary ny tompo sy mpanompo ny atao hoe fiainana kristiana koa i Poly (Efes. 5.21-6.9).
Azo zaraina roa lehibe ny epistily:
Famonjena sy fihavanan'ny voary manontolo (1.1 - 3.21)Hanova
Teny fanokafana (1.1-2)
Fankalazana an'Andriamanitra noho ny fanavotany (1.3-27)
Avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahavelomana mandrakizay (2.1-22)
Fanapahana sy fahefana any an-danitra (3.1-13)
Vavaka fiekena ny asan'i Kristy (3.14 - 3.21)
Fananarana hanana fitondran-tena mendrika (4.1 - 6.24)Hanova
Firaisana kristiana sy famonjen'i Kristy (4.1-13)
Olom-baovao ao amin'i Kristy lohan'ny Fiangonana (4.14-32)
Fanoherana ny asan'ny maizina sy fandehanana araka ny maha zanaky ny mazava (5.1-21)
Fitondran-tena kristiana (5.22 - 6.9)
Fitaovam-piadiana ara-panahy (6.10-17)
Fanaovam-beloman'i Paoly (6.18-24)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_ho_an%27ny_Efesiana&oldid=1038761"
Dernière modification le 12 Oktobra 2021, à 08:50
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 08:50 ity pejy ity.